21-kii Oktoobar Dhankeedi Xumaa Wax Ma La Iska Weydiiyey?! » Daawo Video | KEYDMEDIA ONLINE
Warsame Gaabane (KON) - Sannad kasta marka la gaaro 21 Oktoober ayaa Dad badan oo Soomaaliyeed xusaan maalintaas uu dhashey Kacaanku. Qaar u arka maalin ka mid ah maalmaha Wanaagsan ee Soomaalida soo marey iyo qaar u arka maalin Madow oo soo martey Ummadda.
Arrintaas talo Marooqsiga iyo amar ku taagleynta wuxuu kala mid ahaa Kooxda Shabaab. Aydiyaloojiyaddooda Siyaasadeed unbey ku kala baddalanyihiin.
Waxey aheyd Shirkad saamiley ah oo ay ku shirkoobeen dad faro badan oo gaaraya 5 Million oo qofood. Shirkaddaasi waxey laheyd maal gashi nooc walba ah. Waxaana bangiga u yaalley Keyd lacageed oo bannaanka ka ah howlaheeda kale ee beero, xoolo iyo ganacsi kale iwm.
Ciidankii Shirkadda Ammaankeeda ilaalinayey ninkii madaxda u ahaa ayaa shirkadda guddoonkeedi si qasab ah oon doorasho aheyn ula wareegey. Dadkii saamiga ku lahaana wuxuu ku yiri: "War anigaa shirkadda ilaaladeeda madax ka ah oo madaxda shirkaddu way idin dhacaan. Habeenkiibey gurtaan lacagta oo wax yar oo aan macno laheyn ayey afka idiin mariyaane anigaa idin dherjinayee igu taageera howshaan oo igu kalsoonaada!" Haye iyo howraarsan ayaa loogu sacbiyey.
Warsame Gaabane - Wadaadyare09@gmail.com